Shoora Ijaarsi Hidha Guddichaa gama guddina dinagdeefi hariiroo alaatiin qabu
Shoora Ijaarsi Hidha Guddichaa gama guddina dinagdeefi hariiroo alaatiin qabu Featured
Pirojektii Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa ijaarsarra jiru (Suurri Haddush Abrahaa)
Ijaarsi Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa Bitootessa 24 bara 2003 ifatti eegale. Ijaarsa hidhaa kanaa xumuruuf qarshiin barbaachisu biliyoona 80 yommuu ta’u, hanga ammaatti qarshiin ummatarraa walitti qabame biliyoona 10 qofa. Hidhichi wayita xumuramu fedhii humna ibsaa biyyattii guutuun alatti humna ibsaa biyyoota addunyaaf dhiyeessuun sharafa alaa argachuuf kan oolu ta’a. Dhiyeessiin humna ibsaa gabaa addunyaaf taasifamu kun hariiroo biyyattiin biyyoota addunyaa waliin qabdu jabeessuu keessattis shoora guddaa taphata.
Torban darbe Waajjirri Qindeessa Hirmaannaa Ummataa Ijaarsa Hidhaa Guddicha Haaromsaa Itoophiyaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee gaazexeessitoonni ijaarsa hidhichaa akka daawwatan taasiseera. Hoji Gaggeessaa Olaanaa ijaarsa hidhichaa Injinar Simmany Baqqalaa sirna daawwannichaarratti akka jedhanitti, biyyi keenya akkuma biyyoota kaanii hiyyummaa keessaa ba’uuf tarsimoowwan diriirsite keessaa ijaarsi hidhaa haaromsaa isa tokkodha. Ijaarsi hidhichaa yeroo ammaa namoota kuma kudhanii ol ta’aniif carraa hojii uumuu danda’eera. Wayita xumuramus miliyoonotaaf carraa hojii uumuun alatti guddina dinagdee biyyattii daran kan saffisiisuu ta’a. Gama dippiloomaasiins dhiyeessaa humna ibsaa ardii Afiriikaa qaxxaamuru taasisuuf qophiin xumurameera.
Hidhichi guddinaan Afiriikaarraa sadarkaa duraa addunyaarraa sadarkaa 6fa ta’uusaatiin qalbii hawaasa idila addunyaa hawwataa jira jedhu Injinar Simmanyoon. Haaluma kanaan bulchitoonni, ambaasaaddaroonniifi namootni bebbeekamoon addunyaa hidhicha daawwataniiru; ammas daawwachaa jiru. Kana malees, miidiyaaleen addunyaa bebbekamoon 400 ta’an hidhicha daawwataniiru. Maallaqni sababa daawwannaan argamuun argamus diinagdee biyyattii guddisuurra darbee dhaggeettii biyyattiin addunyaa biratti qabdu daran olkaasee jira. Hojii dippiloomaasiifis haala mijataa uumee jira. Deggersa maallaqaa doolaara Ameeriikaa kuma 150 gamtaan Afiriikaa tibbana ijaarsa hidhichaaf taasise bu’aa ifaaja akkasii keessaa argamu ta’uu ni eeru.
Obbo Tsaggaa’ee Shumburee Waajjirri Qindeessa Hirmaannaa Ummataa Ijaarsa Hidha Guddicha Haaromsaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti, Qindeessaa Sochiifi Hirmaannaa Ummataati. Akka isaan jedhanitti, ummatni biyyattii qabaatee ykn irraa hafee osoo hin taane soorata ittiin lubbuusaa jiraachisurraa muree hidhicha ijaaraa jira. Kunis rakkoo har’a isa mudatu akka salphaatti lakkaa’ee jireenya bor hojjetee itti ce’u abdiin eeggachaa jira. Hunda ol hirmaannaan namoota galii gadaanaa qabanii daran kan nama boonsuufi mul’ata boriif kan nama kakaasudha. Hirmaannaan namootni kophee qulqulleessaniifi qulqullina naannawaa irratti bobba’an taasisaa jiran olaanaadha.Gama dippiloomaasiins namoota biyyoota adda addaarraa affeeruun hubannoo uumuurratti sochiin taasifame hedduudha.
Ijaarsa hidhicharratti ogeessota 200 ol ta’anitu biyyoota garaagaraarraa hirmaate jira. Namootni hirmaatan kunneen ce’umsa tekinooloojii saffisiisuun alatti hariiroo biyyi keenya biyyoota addunyaa waliin taasisaa jirtu dhugoomsuuf shoora guddaa taphatu. Hidhichi ummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afiriikaa dabalatee biyyoota addunyaa mara fayyadamaa taasisa. Sudaaniifi Misiris akka kanaan duraa hangi bishaanii waqtiilee irratti hundaa'uun kan ol ba’uufi gad bu’u osoo hin taanee waggaa guutuu hanga bishaanii walfakkaataa akka argataniif gargaara. Haroo nam-tolcheen hojjetamaa jirus tuuriistoota hedduu biyyoota addunyaarraa hawwatuun shoorrii dinagdeefi dippiloomaasiisaa guddaadha.
Walumaagalatti, ijaarsi hidhi guddichaa wayita xumuramee tajaajila kennuu eegalu carraa hojii bal’aa uumuun alatti guddina dinagdee eegalame daran saffisiisaa. Gama biraatiin annisaa elektiriikaa biyyoota addunyaatti gurguruun galii sharafa alaa kan argamsiisuufi hariiroo biyyattiin biyyoota alaa waliin qabdu daran kan cimsuudha.
Torban kana/This_Week 12418
Guyyaa mara/All_Days 1821838